KIPTAS Silivri Heerka 3aad Lottery Bakhtiyaanasiibka ayaa la qabtay | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulKIPTAS Silivri Marxaladda 3-aad ee Sawirka
kiptas silivri marxaladda sawirka ayaa la sameeyay
Khudbaddiisii ​​xafladda KIPT Silivri Heerka 3-aad Kura Lottery Ceremony, madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu wuxuu ka yeeray baaqa soosocday Maareeyaha Guud Cali Kurt: “Waxaad gaarsiin doontaa qaar ka mid guryaha aan soo sawiray. Anaga, muwaadiniinteenna waddanka ka timid iyo eheladooda, annagoo tixgelinayna xaddiga mushaharka ugu yar ee Turkigu xitaa kuma riyoon karno dadkeenna daqliga ugu hooseeya, fikradda mashruuca waxay ku qaadan kartaa guryaheena daqliga, Mashruuca I Silivri 4 ayaa ku dhawaaqay. Aynu maanta wax saamixno oo aynu injiilka u gaadhsiino qoysaskooda. Toddobaadka soo socda; Aynu ku quudinno dadkeenna, bulshadeenna oo aan rajeyno 'Xitaa xaaladahaan oo kale, fursado ayaa lagu gaari karaa'. Tani waa masuuliyadeena. Waxaan rajeyneynaa inaan warkan wanaagsan siin doono Istanbul isbuuca soo socda anagoo u sii marineyna KIPTAS. ”
Madaxweynaha Dawladda Hoose ee Magaalada Istambul (IMM) Madaxweynaha Ekrem Imamoglu ayaa ka soo qaybgalay KIPTAS Silivri Serevri Stage Lottery Lottery Ceremony. SecretaryBBoğlu Xoghayaha Guud İBB Yavuz Erkut, AdvisBB Lataliyaha Madaxweynaha iyo SözcüSü Murat Ongun, Gudoomiyaha KİPTAŞ Ertan Yıldız iyo Maareeyaha Guud ee KİPTAŞ Ali Kurt ayaa la socday. Kurt ayaa khudbad ka jeediyay magaalada ka hor xaflada.
KURT: "DIIWAAN GELINTA SHARCIGA SHARCIGA EE KALE OO KALE"
Wuxuu carrabka ku adkeeyay inay sameeyeen horumar la taaban karo waqti gaaban isla markaana mashruuca gurisiinta bulshada Silivri 3rd Stage uu ka mid yahay. Kurt wuxuu la wadaagay macluumaadka ku saabsan mashruucan wuxuuna yiri:
Mashruucayagu, wuxuu ka kooban yahay 1513 guri, 7 unugyo ganacsi, 300 masaajid oo ay leeyihiin 1 qof, 26 fasallo, 4 dugsi hoose iyo sare iyo 1 xarun caafimaad, ayaa lagu fuliyay 3 shirkadood qandaraasleyaal 3 marxaladood. Bishii Agoosto 2019, 2 ka mid ah horumarradeenna waxay ahaayeen qiyaastii 70-75 boqolkiiba, halka mid ka mid ah qorshaheenna uu si fiican uga dambeeyay qorshaha ganacsiga oo leh 55 boqolkiiba. Koox ahaan, waxaan u soo marnay marxaladdan heer la mid ah heerarkeenna kale oo leh qaab ganacsi oo aan ku soo marnay qaab dhismeedka sharciga. Markii ugu horreysay ee aan ka wada hadalnay mashruuca, waxaan ogaannay in shatiga mashruuca iyo hirgelinta mashruucu uu midba midka kale ka duwan yahay. Qorshayaasha soonaha wareega ayaa sidoo kale la joojiyay. Waxaan bilownay howsha diyaarinta qorshayaasha horumarinta si deg deg ah. Kadib xaqiijinta oggolaanshaha qorshayaasha IMM, waxaan ka helnay dib-u-habeyn liisanka dib-u-eegis lagu sameeyo mashruucayaga hadda oo aan dhammaystiray macaamilkeena sagxaddeedka ilaa Ciidda Masiixiga. ”
KURT: "DIIWAAN-GALINTA MACALLINKA 2 BILOOD"
Isagoo caddeeyay inay qorsheynayaan inay toogtaan Xarunta Eurasia Show Center ee Yenikapı 2 bilood ka hor, Kurt wuxuu sheegay inaysan fulin karin codsiyadan daacuunka dartiis. Kurt wuxuu sheegay inay aadeen qaban qaabada ka-faa'iideystayaasha dhibaato kala kulmi doona howlahan “Waxaan dib u dhigney bixinta lacagaha bilaha Abriil iyo Meey 2 bilood. Muddadii kumeelgaarka ahayd ee Maajo, waxaan sameynay qorshe lagu bixinayo 4 qaybood oo isla'eg. Ujeedadayada arimahan ayaa ahayd in aan yareyno culeyska muwaadiniinteena ee bixiya kirada iyo qeyb ka mid ah. Waxaan ku faanaynaa nafteenna inay tahay qaab dhismeedka shirkadeed ee ugu horreeyay oo sidoo kale codsigan ku faafaya dalka Turkiga, ”ayuu yidhi.
İMAMOĞLU: “WAAN KU QABANAYNAA MASHRUUCKAAN QARANKA”
Madaxweynaha İBBoğlu İmamoğlu wuxuu yidhi, "Waqti adag oo caynkan oo kale ah iyo jawi qalalan, KIPTAS waxay muujisay sida ay ugu fiican tahay inay u diyaariso mashruuc ay horay dhibaatooyin uqaban jireen, si ay uga dhigto kuwa haysta saxda ah habka ugu aqoonta wanaagsan, kuna ilaalinaya tayadeeda heerka ugu sareeya. Waxaan si daacad ah ugu mahadnaqayaa shaqaalaha, Maareeyaha Guud, Guddoomiyaha Golaha, dhammaan maareeyayaasha iyo dabcan dhammaan shaqaalaha goobta jooga. Markii aan booqday garoonka, indhahayga ayaan ku arkay in labadaba jawi shaqo oo ku habboon geeddi-socodka faafa la bixiyay iyo in la muujiyay tayada wax soo saarka ay ka-faa'iideystayaashu muujiyeen. Waan faraxsanaa ”.
Isagoo sheegay in uu lasoconayay mashruucan bilowgiisii, İmamoğlu wuxuu yidhi, "Qaar ka mid ah rabitaannadayada iyo dalabaadka dadkeenna sidoo kale ajendadayda ayey ku jiraan. Waa qodob qiimo leh marka loo eego meesha ay ku taal. Waxay leedahay aqoonsi in lagu noolaado hanaan ka duwan Silivri. Waxaa jira wax dadka kicin kara. Xaashiyaha ama majaajillada, waxaa jira dhul cagaaran oo ku xiga, waxay leedahay hortiis howsha horteena oo aan weligeed la qaban, laakiin aan wali bilaaban. Halkaan waxaa ku yaal aag madaddaalo, waa waajibaadka iyo mas'uuliyadda IMM in ay hodanka ku noqoto meesha oo aan ku kobciso qaab baarkin caan ah oo Istanbul ah ”.
WAA MASUULIYAD NATIIJADA ADDUUNKA MAGAALADA "
Isagoo carrabka ku adkeeyay in falsafadda ugu weyn ee KİPTAŞ ay tahay soo saarista guryaha bulshada, İmamoğlu wuxuu hoosta ka xariiqay in ku daridda dareenka dabiiciga ah ee horumarka magaalada ay tahay mid ka mid ah yoolalka muhiimka ah. İmamoğlu wuxuu tilmaamay inay lama huraan tahay in hay'adaha dowliga ah ay leeyihiin mudnaan iyo masuuliyad intaas le'eg. Waxay leedahay hawlgal noocan oo kale ah. Hadaf kale, si kastaba ha noqotee, fikradda gurisiinta bulshada, dadku fursad ayey ku helaan inay guryo ku helaan dakhliyada xaaladdooda guri ee Turkiga sharci maaliyadeed ayaa sidoo kale ah awooda ay isaga siinayaan, qayb ahaan, sidaa darteed kaliya waxay ku riyoon karaan dadka oo ay siiyaan jawi ay ku kasbadaan oo ay ku kasban karaan himilooyinkiisa. Mabaadiidaani waxay muhiim u yihiin falsafada KIPTAS. Dabcan, geeddi-socodka samaynta moodallo moodal ah oo la xidhiidha beddelaad magaalooyin waa waji kale. "Waa inay lahaato awood ay ku soo saarto mashruuc dhaqaale ahaan isku dheellitiran iyo karti ay u leedahay soo saaridda mashaariic gacan ka geysan kara isbeddelka magaalooyinka iyo dib-u-cusboonaysiinta magaalooyinka ee Istanbul dareen macquul ah."
"WAA INAAN SAMEYN KARO FURSADAHA CUSUB"
İmamoğlu wuxuu xusey in aduunka oo dhami ay geli doonaan caafimaad, nolol bulsheed iyo geedi socod dhaqaale ahaan ay dhibaatadu ka dhaceyso hanaanka faafa, wuxuuna ku nuuxnuuxsaday inay ku dhaqmayaan ruux is abaabulaya sidaan. İmamoğlu wuxuu tilmaamay in maalmahan laga gudbi karo asagoo abuuraya jawi midnimo, dib-u-heshiisiin iyo is aaminaad, loona sii wado sida soo socota:
Hawshan ayaa dhamaan doonta, noloshu way sii socon doontaa. Laakiin hay'adaha sidayada oo kale ah waxaa waajib ku ah inay ku kobciyaan rajada dadka shaqooyinka saxda ah. In kasta oo ay dhibaatooyinkan jiraan, awooddeenna aan ku soo saarayno shaqooyin; In kasta oo ay dhibaatooyinkan jiraan, abuuritaanka shaqooyin; In kasta oo ay dhibaatooyinkaasi jiraan, haddana waxa na saaran waajib ah in aan muujino awoodda aan kor ugu qaadno raaxada shaqaalahayaga. In kasta oo dhibaatooyinkaas oo dhan jiraan, waxaan sii wadaynaa annaga oo annagu hagaajin doona xaaladaha shaqaalaheenna. Waxaan abuuri doonnaa fursado shaqo oo cusub waxaan noqon doonnaa rajo qeybaha qaar oo leh tillaabooyinka horudhaca ah ee aan horay u soo bandhigi doonno. ”
“XIDHIIDHKA WAA LAGU SAMEEYAY FARSAMADA”
Erayadaas kadib, mamoğlu wuxuu ku dhammeeyay khudbadiisa isaga oo u yeeray wicitaankii xigay Kurt, Maareeyaha Guud ee KIPTAS:
Waxaad soo gaarsiin doontaa qaar ka mid ah guryihii aan sawiray bishii Juun. Anaga, muwaadiniinteenna waddanka ka timid iyo eheladooda, annagoo tixgelinayna xaddiga mushaharka ugu yar ee Turkigu xitaa kuma riyoon karno dadkeenna daqliga ugu hooseeya, fikradda mashruuca waxay ku qaadan kartaa guryaheena daqliga, Mashruuca I Silivri 4 ayaa ku dhawaaqay. Maalmahan waxaan la dhibtooneynaa labadaba damiir ahaan iyo dhaqan ahaanba maalmahan; Aynu ku guuleysano inaanu noqonno rajo dadkeenna annagoo soo saareyna jidka saxda ah, habka saxda ah, moodelka saxda ah, iyo soo saaridda shaqo tayo leh oo tayo leh. Aynu maanta saamilanno, aynu ina gaadhsiinno warka wanaagsan ee Ciidul-adxaha qoysaskooda. Aynu ku quudinno dadkeenna, bulshadeenna, anagoo rajo ka qabna '' Waa suurta gal in la helo fursado xitaa xaaladahaan 'toddobaadyada soo socda. Tani waa masuuliyadeena. Waxaan rajeyneynaa, inaan u siin doonno warkan wanaagsan isbuuca soo socda ee Istanbul ilaa KIPTAS. Asxaabteena ayaa isku diyaarin doona tan.
Joogitaanka khudbadaha ee nootaayada 23aad ee noolaha Bakırköy, bakhtiyaa-nasiibka ayaa la bilaabay. Imamoglu, Erkut, Ongun, Yildiz iyo Kurt waxay go’aamiyeen magacyada hore iyo guryihii ay ku guuleysteen mashruucii 3aad ee Silivri iyo barbaro.
Mayor Mayor Topbaş ayaa ballanqaaday in uu metro u qaadan doono Silivri
Injiilka metrobus-ka ee loo yaqaan "Greatçekmece-Silivri"
Mashruuca Mashruuca ee Greatestmece-Silivri KiPTAŞ'a Dhibbanaha
TÜVASAŞ Natiijooyinka Shaqaalaysiinta Shaqaalaysiinta ee Shaqalaha ah ee Shaqo La'aanta Ayaa Lagu dhawaaqay